bedava deneme bonususlot siteleribitcoin bahisvurkacbahis.comsupertotovip.comtipobetm.combetturkeygiris.orgvenusbetgiris.netKralbet Girişkralbetz.com Sonic the Hedgehog2– Gold Channel Movies
Sonic 1 တုန်းက နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာ ဆိုးနစ်ဟာ ရိုဘော့တ်နစ် အက်မန်းကို ဒိုင်မေးရှင်းဖြတ်သန်းခြင်းမုခ်ဝကနေတစ်ဆင့် မှိပွင့်ဂြိုလ်ဆီ နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အခုအပိုင်းဆက်မှာတော့ ရိုဘော့တ်နစ်ဟာ မှိပွင့်ဂြိုလ်သို ရောက်ရှိပြီးနောက် အ‌ရှုးမပေးဘဲ ကမ္ဘာမြေဆီပြန်နိုင်ဖိုကို ကြိုးစားပါတော့တယ် ဆိုးနစ်ရဲ့ ဆူးချွန်ကနေရရှိတဲ့ စွမ်းအားနဲ့ ဒိုင်မေးရှင်းမုခ်ဝကို ဖွင့်ပြီးနောက် သူပြန်သွားပြီး လက်စားချေနိုင်မလား?
မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အီချီဒ်ဒါမျိုးနွယ်စုရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် Knuckles ရဲ့ ဆိုးနစ်ရှာပုံတော်ဖွေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကရော ဘာများလဲ?
သူတိုမျိုးနွယ်စုတွေကြား အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တစ်ခုအဖြစ်သာ နားထောင်ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတဲ့ ဝိဇ္ဇာမြကျောက်ဆိုတာ အမှန်တကယ်အစစ်အမှန်လား၊ အန္တိမစွမ်းအားလို သမုတ်တဲ့ သည်မြကျောက်ကို ဘယ်သူတွေရရှိသွားမလဲ?
ဆရာဖြစ်သူ ဂုဏ်ယူရအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ လူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုးနစ်ကရော သူ့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာ Sonic2ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကြည့်ရှုခံစားကြဖို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Translated by Keith,Sarah,N3XO&AelianaLyre
Reviewed by AelianaLye
Download Megaup SD 480p Myanmar 445 MB
Download Mega SD 480p Myanmar 445 MB
Download G Drive SD 480p Myanmar 445 MB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 1.71 GB
Download Mega FHD 1080p Myanmar 1.71 GB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 1.71 GB
OnukhjMay 12, 2022Reply
HhMay 7, 2022Reply